Mbuli gị Social Media mmetụta na Unmetric si Smart Data Ngwá Ọrụ | Martech Zone
Mbuli gị Social Media Influ na Unmetric si Smart Data Ngwá Ọrụ
Mọnde, Febụwarị 9, 2015 Mọnde, Febụwarị 9, 2015 Douglas Karr
N'ime ụwa ebe ọtụtụ mgbasa ozi n'ịntanetị na-adaberekarị na ọrụ mmekọrịta mmekọrịta ha na ọha, imepụta usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu. Ma ikike dị ịtụnanya nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka achụmnta ego na-eme ka ụzọ ndị a nwee ike ịdọrọ atụmanya ma mee ka mmata mara.
N'ihe gbasara mgbasawanye ngwa ngwa nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta, a Ọmụmụ ihe 2013 site na Linkedin na TNS na-ekpughe na 81% nke SMB ugbu a na-eji netwọk ndị a eme ka ọganihu azụmahịa, na 61% n'ime ha na-ahụ nnukwu uru na usoro nke inweta ndị ahịa ọhụrụ. Agbanyeghị, iji meziwanye ọhụhụ nke ika gị n'etiti ndị na-ege ntị, ị chọrọ atụmatụ kama ịmị akụ ma ọ bụ ebe a Enweghị atụ wụbata.
Ijikwa data dị oke mkpa na atụmatụ ọdịnaya
Enweghị atụ bụ data nchịkọta ikpo okwu nke ebumnuche ya bụ ime ka ụdị mgbasa ozi ọha mmadụ nwee ike site na ị na-enye usoro data dị mkpa n'oge. Site na nyochaa nlele kachasị arụ ọrụ na nyocha nke asọmpi, ngwa ọrụ ahụ na-eji ọtụtụ usoro iji nakọta usoro data data azụmaahịa nwere ike ịchọta kacha baa uru. Zọ a, ụdị nwere ike ịhazi usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwado data nke nwere ohere ịnweta nke na-adọta ndị ahịa ha.
Ebumnuche bụ ịkwalite usoro niile dị oke mkpa metụtara okike na itinye ihe iji mee ka iyi nke ntụkwasị obi na-adịgide adịgide. Site n'inye gi echiche banyere udiri ihe ndi ozo na-acho otutu aka ma gosiputa mkparita uka di nkpa n'ime obodo ndi ozo, Enweghị atụ na-enyere ndị ụdị aka ịghọta akparamagwa nke ndị na-ege ha ntị ma jiri ihe ọmụma a mepụta ọdịnaya nwere mmetụta karị.
Otu Unmetric na-arụ ọrụ
Ebe ọ bụ na otu n'ime nsogbu ndị dị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-emepụta ọdịnaya ndị na-akpali akpali, Enweghị atụ ezube ikwado nke a site na inye gị mmụọ nsọ, nyocha ngwa ngwa, yana iru nke ederede akọwapụtara. Akụkụ Inspire ahụ na-eburu n'uche mmasị mbụ maka otu ụlọ ọrụ iji gosipụta iyi nke akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu.
Nzọụkwụ ọzọ bụ nyocha nke ndị asọmpi, ebe ikpo okwu na-agwa gị mgbe otu ọkwa, onyonyo ma ọ bụ vidiyo malitere ịnata nlebara anya na ntanetị na ntanetị. Nke a na-enye ohere ohere ịbanye na mkparịta ụka na-ewu ewu ma ọ bụ na-ele anya ka ndị ahịa na-eme.
Ọzọkwa, otu n'ime akụkụ Enweghị atụ na-ewere n'ọkwa ọhụụ kpamkpam na nyocha nke itinye aka nke kwesịrị ịbụ ntọala maka ịhazi atụmatụ ụlọ ọrụ n'ọdịnihu. Isi ihe na-anọchite anya usoro nke na-achọpụta ngwa ngwa ihe ma ọ bụ profaịlụ nke na-enweta ngwa ngwa iji mee ka ụdị ndị a nwee ike ịnwe mkparịta ụka niile na-ewu ewu.
Ebumnuche - Tulee - Nyochaa
Nakọta na nyochaa data nwere ike ịbụ usoro dị mgbagwoju anya ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịhụ dị ka igbu oge. Agbanyeghị, site na iji nlezianya na-elele usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ụdị nwere ike ịchọpụta ohere ndị dị mfe ma mee ka usoro nke ịhazi ọdịnaya na njikarịcha gwụchaa. Site na interface, Enweghị atụ na-ewepụta ozi dị mkpa nke nwere ike ịdị oke mkpa maka ịgbasa mmetụta mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ otu ụlọ ọrụ.
N'ịtụle mkpa ọ dị ịmalite ịmepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta iji rịọ maka ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị ọrụ elebara anya, a na-atụ anya ka obere ụlọ ọrụ lekwasị anya na ọwa ndị a karịa ka ọ dịbu. Enweghị atụ Ebumnuche iji chekwaa ndị na-ere ahịa oge dị mkpa maka ịhazi na itinye usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya aka ma mee ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwee ike ịghọ ndị ama ama na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi.
Tags: nyochaa ọdịnaya mmekọrịtaatụmatụ ọdịnayamepụta ọdịnaya dị egwunchịkọta mmadụ mgbasa oziusoro mgbasa ozi na usoro ọdịnayaelekọta mmadụ mgbasa ozi mmetụtaonye mgbasa ozi na-elekọta mmadụunmetric